Guddiga Amniga baarlamanka oo ku faraxsan xilka ka qaadistii Sanbaloolshe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Kulan maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho guddiga arrimaha gudaha iyo Amniga Qaranka ee baarlamaanka dalka Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin go’aankii shalay ka soo baxay golaha wasiiradda ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya, guulihii ay dhawaan gaareen ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed, iyo kuwa nabad ilaalinta midowga Africa ee Amisom.
Kulanka oo uu shir guddoominayay guddoomiye ku xigeenka guddiga Arrimaha gudaha iyo amniga ee Baarlamaanka Soomaaliya Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow, waxaana lagu taageeray go’aankii shalay golaha wasiirada ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya ay xilka kaga qaadeen agaasimihii hay’ada nabad sugida iyo sirdoonka Qaranka Soomaaliya C/llaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe.
Xildhibaan C/naasir Gaarane oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa talaabadii shalay golaha wasiirada Soomaaliya ay xilkii uga qaadeen agaasimihii hay’ada nabad sugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ku tilmaamay mid wanaagsan, wuxuuna sidoo kale sheegay in wax umadda Soomaaliyeed ay ku faraxdo ay tahay guulihii dhawaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed iyo kuwa amisom ay ka gaareen howlgalka badweynta Hindiya ee gobolada dalka looga sifeynayo kooxda argagaxisada Al Shabaab, islamarkaana ay kula wareegeen magaalooyin iyo deegaanno gobolada dalka ka mid ah.
Kulanka maanta ee guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu imaanayaa kaddib markii shalay golaha wasiirada ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ay xilkii kaga qaadeen agaasimihii hay’adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka.
Agaasimaha hay’adda Nabadsugidda Soomaaliya ayaa lagu eedeeyey inuu ku takri falay awoodiisa, islamarkaana uu xiray dadk xildhibaan ku jiray.